Ihe omimi nke 'ezi obi ulo' PsyOp maka iwepu nnwere onwe gi niile na iwebata 'ndi uwe ojii chere' (akuku 3): Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 22 October 2019	• 10 Comments
Nna ndi mmuo, nna nna, nwa nwoke. N'oge na-adịghị anya a ga-ahụ mmụọ mmụọ n'ubi mọ mmụọ, n'ihi na akụkọ mmụọ mmụọ ahụ ga-abụrịrị ihe na-atọ ụtọ ma bụrụ nke "ekwenye". PsyOp na-ewebata ndị uwe ojii chee echiche George Orwell ma nwee ike ile anya n'azụ ụzọ ọ bụla na enweghị ikike nyocha. A na-etinye akụkọ ahụ n'uche gị kwa ụbọchị site na De Telegraaf; akwụkwọ akụkọ ahụ nke kwadokwara ọchịchị nke na-eme mwakpo dị na '40 /' 45. Thatkpụrụ mbuso agha ahụ na-abịa ọzọ taa.
Na iwu mwakpo ahụ na-abịa n'oge na-adịghị anya na nke mbụ Mgbasa ozi ikuku banyere akụkọ mmụọ a. Janny Knol, onye osote onye isi ndị uwe ojii (o nweghi nwoke ma ọ bụ nwanyị), gwara m na ndị uwe ojii agabularị ebe a na-akọ ugbo n'ihi na enwere enyo na ọnụnọ nke ahihia. Mana, ọ sịrị, ndị uwe ojii enweghị ike ịlele n'ime, n'ihi na nna mmụọ na-eme mmụọ ahụ ekweghị ka ha bata. Already maralarị na a na-arụ iwu ọhụrụ ebe a nke kwesịrị iwepu ihe mgbochi iji chere ihu n'azụ ụzọ, yabụ anyị ga-ewepụta ohere maka ndị na-ebuso agha n'oge ugbu a. A ga - ahọpụta onye ọ bụla na - akpọsa echiche na - agbagha echiche.
"Ah, Vrijland, ị naghị aga ntakịrị oge ugbu a? Ọ bụ na ị gaghị ntakịrị onye ara?"Ever jụla otu ajụjụ gbasara mkpesa mgbasa ozi? Critical na-ekwusi ike mgbe niile maka ndị isi ụgwọ ndị kwụrụ ụgwọ ụgwọ ọrụ ha na nke ha na-akwụ ha ezigbo ụgwọ, ee, ndị ọbịa okpokoro; ụdị dị ka Jeroen Pauw? "Ehe, mgbe ufodi, ha n’ekwu oke nkpa!"Ee, ha na - eme ihe ga - eme ka uche gị pụọ n'oké ụgha ahụ ma mee ka akụkọ mbụ ahụ gaa n'ihu. Ghọtabeghị? Akụkọ a dum nwere ike ọ bụghị ihe ọzọ karịa ọrụ gbasara mmụọ (PsyOp), dịka akụkụ 1, akụkụ 2 en akụkụ 3 nke edemede m. Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị gụọ isiokwu ndị ahụ na mbak, ka onye ọ bụla ghara ịsị:Wir haben es nwanne choro".
Phantom nwa Jan, imara na nwa nwoke nke ghapuru azụ 5 beers iji bulie mkpu dị egwu banyere "iwu na-akwadoghị nnwere onwe" site n'aka nna, ugbu a na-arụ ọrụ nke itinye akara LGBTI na maapụ. N'ihi na anyị nwere otu isiokwu dị mkpa, nke steeti ga-enye gị oge na-abịa na ọgụgụ isi nwere ike ịtụba n'ime ụlọ nga. Iji maa atụ, ọ bụrụ na inwere ihe ọ bụla megide mkpọsa LGBTI n'ụlọ akwụkwọ praịmarị, ugbu a ga-esonyere gị na nna mmụọ site na akụkọ mmụọ a. E kwuwerị, ọ kpọpụtara ụmụ ya n'ụlọ akwụkwọ na ọ bụ maka mmekọrịta nwoke na nwanyị. Nke a doro anya site na vidiyo omimi miri emi ya, dị ka De Telegraaf si kwuo:
O doro anya site n'ozizi Gerrit Jan van D. ihe echiche ya banyere mmekọrịta dị mma. Dika iwu Chineke si di, nwoke gha abanye na nmekorita nke nwanyi. Ọ bụrụ n’ịmeghị nke ahụ, ị ​​nọ 'na irụ n'anya', mgbe ahụ i guzoro na mmụọ gị na nkwonkwo ụkwụ gị na 'mmiri mmiri', ka Van D. kwuru na otu n'ime okwuchukwu ya.
Ọ bụ nnọọ nkọ na ọkaibe mmemme anyị na-agba àmà. Nna Gerrit Jan (onye bụ 'nna nna') nwere 'mmụọ echiche' na o doro anya na o nwere ihe megide gays. Nke ahụ bụ ihe kpatara nwa nwoke Jan, onye rọrọ nrọ maka ụzọ mgbapụ na Canada (ma ọ bụ nọrọrịị ebe ahụ, nke ahụ apụtaghị, n'ihi na ọ nweghị ihe doro anya). A na-ese onyinyo nke PsyOp na nna chọrọ ịzụlite ụmụaka heteronormatively ka nwa nwa Jan bụrụ nwoke nwere mmasị nwoke. Jan chọrọ ịgbanahụ ọchịchị nna "John Eagle", nke ahụ bụ ihe onyonyo. Ikekwe ọ hụkwara onye na-ere ahịa na Ruinerwold n'anya. Ọmarịcha ahịa ahụ nyeere ya aka kpọọ ndị uwe ojii.
isi mmalite: visserleeuwarden.nl
A na-achịkọta ndị mmadụ maka iwebata uwe ojii nke George Orwell. Ole na ole ndị Dutch ga-emegide nke ahụ. N’ezie, ọtụtụ ga-ahụ na ọ dị mma na ndị nwere echiche gbagọrọ agbagọ, dịka ọmụmaatụ heteronormativity (nke nwoke dị ka onye na - abụkarị nwanyị) bụ echiche a ga - echechibido ya n'obe agụmakwụkwọ (nlekọta GGZ). Maka nke ahụ ọ dịkwa oke mfe na ndị uwe ojii achọghịzi ikike maka nyocha, mana ha nwere ike ịbanye. A kọrọ na Nna Gerrit Jan kpọpụtara ụmụ ya site na otu ụlọ akwụkwọ ụlọ maka na ha ga-agbaso iwu steeti. Nke a nwere ike igosipụta na a kụziiri ụmụ ya LGBTI normativity na ya ekwenyeghi na nke a. Yabụ ọ bụrụ na ọdịnihu ị ga - ahụ na ọ bụ ihe na - ezighi ezi na ụmụ gị nọ n'ụlọ akwụkwọ praịmarị kwesịrị ige eze nwanyị na - adọkpụ ntị nke na - agwa ha na ha abụghị nwa nwoke ma ọ bụ nwa agbọghọ, kama na ha ka nwere ike ịhọrọ okike ha ma kwuo ihe banyere nke ahụ, ị ​​bụ enwere ike dissident. Obi mmụọ a nke PsyOp elekọtaworị nke ahụ.
Yabụ na anyị na-ahụ maka nkwadebe nke iwu mbuso agha, mana n'ihi na akpọzighi ya ya na n'ihi na a na-akpọbata ndị mmadụ n'ọnọdụ nnabata site na arụmọrụ mmadụ, ọ nweghị onye ga-emegide iwebata iwebata nke ndị uwe ojii na ụzọ ọ wakporo.
N’ịcheche Holland, ahụrụ m ka osimiri ndị sara mbara na-eji nwayọ na-aga n’ime obere ala na-enweghị njedebe, ahịrị osisi pọpla na-enweghị atụ na-eguzo dị ka ábụ́bà ndị toro ogologo na njedebe; na nnukwu mbara igwe gbachapụrụ agbachasị agbasasịkwa n'ime mba ahụ dum, otu osisi, obodo nta, ụlọ elu ndị mkpọda, ụlọ ụka na ebe dị egwu nọ. Ikuku dicha ala ma anyanwụ ji nwayọ nwayọ nwuo, na mpaghara niile a na-anabata olu Telegraaf ma na-anụ na-enweghị nkatọ.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: npostart.nl, assercourant.nl
Ihe omimi nke 'ezi obi ulo' PsyOp maka iwepu nnwere onwe gi niile na iwebata 'ndi uwe ojii chere' (akụkụ 2)
Tags: 1984, dood, Eagle, agba, chere uwe ojii, ndị uwe ojii chere, George, chọtara, Janny Knol, John, arụ ọrụ, Orwell, uche, psyop, wakporo, buso agha, iwu razzia0, buso iwu, Ruinerwold, ndi igbo, mẹ ivu iya, nna ekene, nwa igbo, efu
23 October 2019 na 22: 36
Na onodu nke ihe di iche na ihe di egwu
Ihe omimi di omimi a gbara gburu gburu nke anakpo mmadu abuo? ebe ọ bụ na ejidere onye na-enyo enyo
n'ihi nchọpụta nke ahụ abụọ na-adịghị ndụ na Martin Luther KingLaan na Diemen.
Ajụjụ dị aicalaa dabara adaba, gịnị kpatara ole onye kpatara ya? , ihe niile na-anọ na-amaghị ama, spooky, haunted seen home.
Ọ dị ka isi nke anọ nke ncha, NL pere mpe.
Onye na-enyo enyo enwetụbeghị ụzọ meer na ihe ndị ọzọ na ihe kpatara enweghị ambulances, mgbe ihe niile ahụ dị abụọ !!! ịkwa ụta maka ndị nwụrụ anwụ, ịmalitegharị na ọtụtụ ajụjụ…
24 October 2019 na 21: 42
Ah, ee, ọ bụ oge ọzọ maka ozi ọhụrụ na Telegraaf .. ha ga - eleba anya na usoro iheomume Facebook m?
A na-etinye ihe ederede n'ụzọ dị mma:
(free ịgụ na Incognito mode nke ihe nchọgharị Google Chrome)
Ekwere m na ọkara nke ụka Netherlands na-ekwere na ndị mmụọ ozi na ndị mmụọ ọjọọ. N'ezie, ijeri mmadụ nọ n'ụwa kwenyere na ndị mmụọ ozi, ndị mmụọ ọjọọ ma ọ bụ ndị mmụọ (dị ka Islam) si kwuo.
Nke ahụ kwuru na anyị na-eche maka mgbasa ozi Pauw nke na-esote ebe onye ọkachamara na-ahụ maka mmekọrịta ga-akọwa otú echiche John Eagle si dị iche!
Ebee ka Peter R. dị n’akụkọ a? Eee, a ga - akpọ nke ahụ n'ezie ma ọ bụrụ na a ga - eme nnwale DNA maka nne nwatakịrị ahụ! (mana nke a bụ echiche banyere etu usoro edemede ahụ si dị)
28 October 2019 na 13: 39
Otu n'ime nkwubi okwu m mgbe m gụsịrị akụkọ ndị na-adịbeghị anya na weebụsaịtị a:
Anyị niile ga-ahụrịrị na, n'etiti ihe ndị ọzọ, anaghị anapụ ikike ndị a na-esoghị anyị, n'ihi na ndị mmadụ na ụlọ ọrụ ndị na-achọ ike na ike ga na-eyi ikike ndị a mgbe niile.
- ikike ị jụ nyocha ụlọ na-enweghị ikike ụlọ ikpe
- ikike nhọrọ mmuta n'ụlọ (ikekwe n'ọnọdụ ụfọdụ)
- ikike ịjụ ịgba ọgwụ mgbochi
- ikike iji chebe onwe gị
- ikike ị nweta ndị isi ihe nkiri na ọfịs ọ bụrụhaala na ị ghara inye ha nsogbu na ọrụ ha
28 October 2019 na 13: 48
Mana nke kachasị: ikike iche 'ihe ị chọrọ'
Iwebata nke ndị uwe ojii chere echiche.
Chee echiche, nwoke ahụ kwenyere na "ghosts". Ihe dị ka ijeri mmadụ 5 n’ụwa niile na-eme nke ahụ. Ndị Kraịst na ndị mmụọ ozi na ndị mmụọ ọjọọ, ndị Alakụba ditto na Ndị Kraịst Kraịst kwenyere na Onyenwe anyị zitere mmụọ nsọ ya na Pentikọst. Ya mere anyi nwere ezumike Whitsun.
28 October 2019 na 15: 31
Daalụ maka mgbakwunye ahụ, ọ na-agbadata mgbe niile na nke ahụ.
Mmadu o bula nwere ikike iche echiche / ikwere n'ihe ochoro, kwa ikike ime ihe kwesiri ya, oge o buru na nke a anaghị emebi ikike na ohere ndi ozo.
Echiche nke ime omume adịghị nhịahụ maka ndị na-eche echiche, na ịnweghị ike ikwenye na ibe gị na nkọwapụta.
28 October 2019 na 15: 42
Ma ihe banyere akụkọ akụkọ n'onwe ya, ọ bụ ihe nzuzu etu esi esi kọwaa / ịkọwapụta nke a, nke a na-egosi n'ezie ebumnuche dị n'okpuru. Ma ebumnuche a bụ ịnabata ndị na-arụ ọrụ na mgbede, ma ọ bụ ịkwado mgbanwe nke iwu, enweghị echiche. Eziokwu ahụ na-adịgide na anyị ga-echebe ikike anyị yana na ị na-arụ ụka maka nke a, echere m na ọ bụ ihe dị mma.
28 October 2019 na 21: 24
anya na ọ ga-edozi, ọ gaghị abụ mmadụ ndị isi ike. Naanị wepụ ma nwalee….
29 October 2019 na 10: 51
Ihe omume pụrụ iche n'oge na-adịbeghị anya. N'ụbọchị taa, mgbe ikpe Anne Faber gasịrị, onye ọka ikpe anatawo ọrụ abụọ dị ka onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ. A na-ekenye ndị ụlọ ọrụ azụmaahịa ọrụ dị ka ndị uwe ojii…
1 November 2019 na 23: 49
Mama van Ruinerwold anaghị eli, mana zoro ezo na nzuzo dị ka Telegraaf, site na
Dabere na telegraaf
Ndi crematorium weputara faịlụ puru iche, gini kwesiri ka anyi mee ebe ozo?
site. E lighị nne ahụ, mana dịka bọọlụ kristal nke Telegraaf si kwuo.
Achọghị ya n’ogige ahụ kama a na-akpọ ya “ihe faịlụ pụrụ iche”.
A naghị anabata anyị ka anyị wepụta nkọwa, mana?
2 November 2019 na 13: 58
Ndị nwere echiche Ndị Kraịst na ndụ anaghị adịkarị mma n'ihi nkwenkwe 'ịmaliteghachi ọwụwa anyanwụ'.
Mana ha na-agụ nke a, yabụ, ọ na-eche oge ogwe ọzọ ..
" Ihe omimi nke 'ezi obi ulo' PsyOp maka iwepu nnwere onwe gi niile na iwebata 'ndi uwe ojii chere' (akụkụ 2)
Terroristgha na-eyi ọha egwu wakporo London, Manchester, Paris, Barcelona na Rotterdam na 23 na 24 October? (Melite) »
Nleta nile: 14.002.223